Rikooo si Aircrafts ọrụ na prepar 3d v4
ajụjụ Rikooo si Aircrafts ọrụ na prepar 3d v4
1 afọ 11 ọnwa gara aga #643 by brunoeduardo
Ụfọdụ ozi ọhụrụ version of prepar 3d v4?
1 afọ 11 ọnwa gara aga #663 by howlak
Isi aha abụghị ezi, anya dị ka ihe niile Rikoo FSX ugbo elu anaghị arụ ọrụ .:
Rikoo bụghị isi Mmepụta nke addons. Ọtụtụ FSX Native ugbo elu ọrụ P3D V4, ma mbụ ma ọ bụ modded site Rikoo. Ma FS9 ported ugbo elu anaghị arụ ọrụ.
1 afọ 10 ọnwa gara aga #667 by macca22au
Ụmụ okorobịa, nnọọ ole na ole ma ọ bụ ọ FSX ma ọ bụ FS2004 ugbo elu ga-arụ ọrụ P3Dv4.
Kasị P3d v3 ugbo elu, karịsịa mgbagwoju ụgbọelu na FMC anaghị arụ ọrụ na P3D4
The 64bit ije nke P3D4, pụtara na ụfọdụ ugbo elu, mma etc ga mkpa ụfọdụ mgbanwe na-dakọtara.
M na-agba ndị dere ọtụtụ n'ime downloads ebe a na-arụ ọrụ na-emelite ha tinye-ons.
1 afọ 3 ọnwa gara aga #946 by DRCW
Ọbụna Chris Evens achọpụtala ihe niile ọ na-eme ma ọ bụghị mgbe ọ hapụrụ ụgbọ elu ọ na-ekwu na-arụ ọrụ na V4. N'ịghọta nke ahụ, ị ​​ghaghị ikwe ka ihe ndị a na-arụ ọrụ, n'otu n'otu. Ụfọdụ ụgbọ elu ga-arụ ọrụ ma ndị ọzọ adịghị, ọ dị mfe. Wepu ihe ọ bụla na-adịghị arụ ọrụ ma na-akpata nsogbu. Chere ntakịrị, gụọ forums, ma lelee ndị na-arara ndụ ha na freeware, nweta nkesa ahụ. Imirikiti njehie ndị a dị na mgbanwe na koodu na-agbanwe P3D site na 32 bit ka 64. Na njedebe ọ ga-aba uru. Gbaa mbọ hụ na FSW ... faịlụ dị egwu yiri ọrụ nile na P3D v4. Enwere m ike ibudata foto foto m niile. Nke a bụ n'ihi faịlụ ndị mara mma bụ ihe ọ bụla karịa textures mgbe ụgbọelu na-arụ ọrụ na usoro.